बिक्रीको लागि प्रसिद्ध Housebatat। 1 को2फ्लोटिंग चैपलहरू विश्वभर। अब एक अस्थायी घर
बिक्रीको लागि हाउसबाउट - बेइजिङ
घर » सूचीकरण » बिक्रीको लागि हाउसबाउट - बेइजिङ
बिक्रीको लागि प्रसिद्ध Housebatat। संसारमा दुईवटा फ्लोटिंग चैपलहरू अब एक अस्थायी चर्च घर बिक्रीको लागि!
बिचलित - हो, यो घरघरमा कैद भइरहेको छ। मानिसहरू रोक र बिन्दु। ती तस्वीरहरू र लहर छान्नुहोस्। उनीहरू भित्र हेर्न चाहन्छन्। तपाईंको डेकबाट, तपाईं मुस्कान र पछाडि घुमाउनुहुन्छ। तिनीहरू मेमोरेज हुन्छ। तिनीहरू चाहन्छन् ती तपाईं थिए ... वा, कम से कम तपाईं संग हुन सक्छ। "
पहिले नै "चैपल मा बे" को रूपमा चिनिन्छ त्यो वास्तवमा संसारमा केवल दुई अस्थायी चैपलहरू एक विवाह चैपल, थियो। त्यस जीवनमा, "यात्रा च्यानल" मा प्रदर्शित गरिएको थियो र "लन्डन डेलि मेल" मा लेखिएको थियो। पूर्ण पुन: प्रयोग र पुनरुत्थान पछि, उनी अब घर घर र घरघरको बिक्रीको लागि हो। उनको अर्को जीवनमा के हुनेछ जब उनी तपाईंको हो - शायद सिएटल वा चेसपेकमा स्थायी रूपमा एक स्थायी घर, वा समुद्री विमानमा एयरबिनको रूपमा सेवा गर्नेछ। अथवा, साथीहरूलाई मनोरञ्जन गर्दा तपाईं इन्ट्राकोस्टल वाटरवे फ्लोट गर्नुहुन्छ? सम्भवतः, त्यो तपाईंको कार्यालय हुनेछ जहाँ ग्राहकहरूले तुरुन्तै तपाईंको ब्रान्ड पहिचान गर्दछन् र तपाइँले तपाईलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग गर्दछ। शायद तपाईं एक शेफ / restauranteur हो र तपाईं डाइरेक्टरी यात्रा को लागि सवार ग्राहकहरु लाई डू गर्नेछन्। धेरै विकल्पहरू!
यो भिडियोको लागि माथि क्लिक गर्नुहोस्
बिक्रीको लागि हाउसबाउट
हो, त्यो शुरुवात गर्दैछ। र उनको जीवन केवल आफ्नो कल्पना द्वारा सीमित छ। त्यो के हुनेछ?
$ 1,300,000 भन्दा बढी एक लक्जरी फ्लोटिंग घरमा यसको मूल निर्माण र हालको रूपान्तरणमा जानुभयो। मूल चैपल डिजाइन को अधिकांश, एक 30 फुट स्टीपल सहित रह्छ,7बढ्दो दाग-काँच खिडकियां प्रत्येक तूफान प्रतिरोधी गिलास, तीरदार काठ-काठ चैपल दरवाजे, धातु को छत संग कवर गरिएको छ, र दृश्यहरु र मनोरञ्जन को लागि कवर र खुले डेक । क्यानमैनर बर्ग को कुल सतह डेक र 1800 वर्ग फीट घर सहित 1050 वर्ग फीट हो।
भित्र सबै विलासिता र घरमा आराम छ। पूर्णरूपमा रूपान्तरित, खुला-अवधारणा डिजाइनमा एक लिङ्ग कोठा समावेश छ जुन एक आवरण डेक, एक आश्चर्यजनक भान्साको साथ आधुनिक उपकरण, ग्रेनाइट काउन्टीप्स र एकै सुन्दर सुन्दर दृढ फर्शहरूमा खुल्ला कोठा र प्रविष्टिमा पाइन्छ। मुख्य स्तर मा ensuite स्नान र एक दोस्रो अतिथि स्नान संग मास्टर सुइट हो। एक सर्पिल सीढ़ी एक दोस्रो उत्रो बेडरूम मा जान्छ।
फ्लोरिडा, प्लोमेटोमा म्यानेटे नदीमा एक खूबसूरत समुद्री मितीमा आधारित, उनी धेरै मध्य दिनका लागि पूरक कूलिंग प्रदान गर्ने ठूला प्रशंसकहरूसँग पूर्ण वातानुकूलित छन्। पानीमा यात्रा र मजा लिनुहोस् - एक आठ किलोवाट जनरेटर सामान्यतया सबै काममा राख्छ। मोशन-डिश उपग्रह टीवी एन्टेना समावेश गरियो!
दुई डायमण्ड सीरीज द्वारा संचालित क्वामिन्स डीजल ईन्जिनियरिङ्, उनी पूर्णतया आत्म-प्रोडल हुन् र यसको बारे मा6गुटहरुमा आफ्नो पावर भित्र जान सकिन्छ। फ्र्यामेड नौसेना आर्किटेक्ट डेनियल जे Avoures र एसोसिएटहरूले मूल जहाज डिजाइन र निर्माण गरे। एक्सएनएमएक्स व्यक्तिहरूलाई अधिकतम अधिकतम गतिशीलताको साथ सुरक्षित र सहज पारित गर्ने क्रममा उपलब्ध गराउने क्षमतामा पोर्टलको तयारीमा कुनै विवरण देखिएन। घरले दाँया वा स्वागत स्थानमा दाँया पुर्याउन सक्छ - डिंगीको लागि कुनै आवश्यकता छैन!
33-टन वजन, र 30 'x 60' को माप, यस कम-रखरखाव को आधारभूत संरचना सबै-शीसे रेशा पोत प्रभावकारी छ। जुम्ल्याङमा क्यानमैन हल्समा फ्लोटिंग, पानीमा हिउँँदा कम प्रतिरोध छ र सतावट बनाए रहन्छ जब साना तरंगहरु को माध्यम ले चमकदै जान्छ। बाबा भन्दा बरु, बिजुली किन्च बिजुली इस्पातले बिशेषमा पोत स्थिर गर्न ड्रप। यो सुविधाले उज्यालो पानीमा मोरङलाई अनुमति दिन्छ किनकि कुनै कुखुरा आवश्यक छैन।
तिनी एक 65 "फ्ल्याट स्क्रिन टिभि, छाला फर्निचर, आउटडोर सेटिङ र ग्याँस ग्रिल, साथै एक राम्रो भण्डारण भान्सा सहित तस्वीरहरु मा देखाइएको वस्तुहरु संग पुरा तरिकाले सुसज्जित छ। तपाईं वास्तवमा समुद्री मा $ 900 प्रति महिना मा सवार रहन सक्नुहुन्छ!
के तपाईसँग बेच्नको लागि अद्वितीय घर छ?
ठेगाना: म्यानेटे नदी
जिप कोड: 34221
निर्माण गरिएको वर्ष: 2004
सम्पत्तीको प्रकार: Housebat
बाहिरी: फाइबर ग्लास
फ्लोरिंग: काठ / टाइल
ताप / कूल: जनरेटर संग मध्य
अघिल्लो सूचीटिंकर ट्रटअर्को सूचीग्रीन-निर्मित घर चैपल हिल नजिकै, नेकपा-एक्सएनएनएक्सएक्सएक्स एकस
ग्रीन-निर्मित घर चैपल हिल नजिकै, नेकपा-एक्सएनएनएक्सएक्सएक्स एकस